Ukuhlanganiswa Microsoft Teams Google Ads
clever ads Ngena ngemvume ngama- MS Teams
Ngena ngemvume ngama- MS Teams
Ukuhlanganiswa Microsoft Teams zeGoogle, Google Ads
Thola izexwayiso ezingokwezifiso ngqo engxoxweni Microsoft Teams
Have amagrafu ezenziwe ngqo akhawunti yakho yokukhangisa.
Luhlelo ukuthola ama-metric akho kunoma nsuku zonke noma masonto onke.
Engeza Microsoft Teams
Izinzuzo Clever Ads
Njengoba sithanda ukusho, uzobe ukonga nesikhathi esanele sokujabulela ukuthi ikhofi ekuseni ozithanda kakhulu! ☕
Yonga isikhathi sakho!
Gcina isikhathi sakho esiyigugu ngokubona zonke Google Ads ezibaluleke kakhulu ze-Google, i-Bing Ads kanye ne-Facebook Ads endaweni eyodwa. Vala amanye alawo mathebhu!
Hlela imisebenzi yakho yansuku zonke ngokuyimpumelelo
Ngalokhu kuhlanganiswa, ungasebenzisa amamethrikhi, amagrafu, nezixwayiso ukuhlola inqubekela phambili yemikhankaso yakho, kuwo wonke Microsoft Teams !
Clever Ads , ngokungafani namanye amathuluzi afanayo emakethe, ayidingi imali oyisebenzisayo.
Hlunga ads owathandayo bese uthola isifinyezo sokusebenza ngamamethrikhi namagrafu.
Lawula kudeshibhodi yakho
Finyelela kudeshibhodi yakho futhi ukwazi ukuzenzela ngendlela oyifisayo ukuthi uwathola kanjani amamethrikhi akho ngamaqembu e- Microsoft Teams . Hlunga ukuthi yimaphi ama-akhawunti ofuna ukuwabona, hlela imibiko yakho bese ulungisa izexwayiso zakho .
Kungani ufaka uhlelo lokusebenza Clever Ads Microsoft Teams ?
Amamethrikhi abalulekile azotholakala ngqo Microsoft Teams . Lawa ma-metric angaba ukuvela, ukuchofoza, nokuningi, konke maqondana Google Ads nemikhangiso ye-Bing.
Sebenzisa igrafu zibukeke bagcine ukuvela yimiphi amamethrikhi akho. Kungaba okuvelayo, izindleko, noma lokuguqulwa.
Have ukukhetha ukwamukela nsuku zonke noma masonto onke emathebula, ngibenze umphakathi ithimba lakho ukubona, noma amehlo akho kuphela.
Sizokunikeza izeluleko zokuthuthuka Google Ads zakho Google Ads isu phezu kwesicelo sakho. Singanikeza izeluleko ngemikhankaso yakho njengokushintsha isabelomali sayo, ukulungisa okuqondisiwe, nokuningi.
Cishe ngomzuzu, ungangeza Clever Ads Microsoft Teams ngqo kwi-akhawunti yakho.
Konke okudingeka ukwenze chofoza inkinobho "Yengeza Microsoft Teams " bese uzoba nayo
Ngena ngemvume ku-Google, i-Facebook, kanye / noma i-Microsoft-Akhawunti ukuthi sihlobene ne-akhawunti yakho yokukhangisa
Emva kokukhetha akhawunti yakho oyifunayo, ukhululeke ukushintshela yikuphi okukhona kwabanye nganoma isiphi isikhathi
Sebenzisa izici eziningi lokusebenza
Thola zonke imibiko eshiwo ngenhla ngaphandle komzamo futhi sizikhandle
Uma unombuzo assistant@cleverads.com
Yini le app ukwenza ncamashi?
Inhloso yalolu hlelo lokusebenza ukwenza impilo yakho ibe lula futhi njengoba sithanda "ukukusindisa isikhathi esanele sokujabulela lelo khofi lasekuseni olithanda kakhulu." Uma Google Ads akhawunti yezikhangiso zeGoogle ofuna ukusebenza nayo, ungaqala ukuthola amamethrikhi namagrafu ngqo Slack noma Microsoft Teams ngokumane uthumele i-bot. Ngale ndlela, ugcina isikhathi sakho esiyigugu ngoba ngeke kudingeke ufake Google Ads nsuku zonke.
Imibiko Ehleliwe : Thola amamethrikhi akho nsuku zonke noma ngeviki esiteshini sakho osithandayo ukuze ubenze babe sesidlangalaleni seqembu lakho noma uzigcine kuwe ngokukhetha inketho yoMyalezo Oqondile.
Izexwayiso EZIZA NGOKUSHESHA : Zizwe uvikeleke kakhulu ngama-akhawunti Google Ads Clever Ads zeClever izokwazisa uma ngabe kukhona okungajwayelekile okwenzeka ku-akhawunti yakho.